« Hebreo 6 [MDG - malagasy] »
6:1 "Koa aoka hilaozantsika ny abidin' ny foto-pampianaran’i Kristy, fa aoka handroso ho amin’ny fahatanterahana isika ka tsy hanao fanorenana indray, dia fibebahana ahafahana amin’ny asa maty sy ny finoana an’Andriamanitra;"
6:2 Ny foto-pampianarana ny amin’ny batisa maro sy ny fametrahan-tanana, ary ny fitsanganan’ny maty sy ny fitsarana mandrakizay,
6:3 Ary izany no hataontsika, raha avelan’Andriamanitra.
6:4 Fa tsy azo atao raha izay efa nohavaozina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa natao mpiombona tamin’ny Fanahy Masina,
6:5 Ary efa nanandrana ny teny tsaran’Andriamanitra sy ny herin’ny tontolo ho avy,
6:6 Nefa mihemotra, dia tsy azo havaozina indray ho amin’ny fibebahana, satria manombo ny Zanak’Andriamanitra indray amin’ny hazofijaliana ka manao Azy ho fahamenarana.
6:7 "Fa izay tany mifoka ny ranonorana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara ho an’ny olona miasa azy dia mandray fitahiana avy amin’Andriamanitra;"
6:8 Fa izay maniry tsilo sy songosongo kosa dia lavina sady akaikin’ny ozona, ary ny hiafarany dia ny hodorana.
6:9 Nefa, ry malala, na dia miteny izany aza izahay, dia manantena zavatra tsara kokoa ny aminareo, dia izay momba ny famonjena.
6:10 Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asanareo sy ny fikelezan’aina amin’ny fitiavana izay nasehonareo noho ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo, ary mbola manompo ihany.
6:11 "Ary mbola irinay ianareo rehetra samy haneho izany fahazotoana izany mba hahazo ny fahatokiana be ny amin’ny fanantenana hatramin’ny farany;"
6:12 Mba tsy ho malaina ianareo, fa hanahaka ireo mandova araka ny tenifikasana amin’ny finoana sy ny faharetana.
6:13 Fa fony nanao tenifikasana tamin’i Abrahama Andriamanitra, ary satria tsy misy lehibe noho ny tenany izay azony nianianana, dia nianiana tamin’ny tenany Izy,
6:14 Ka nanao hoe: “Hitahy anao amin' ny fitahiana tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro anao.”
6:15 Ary araka izany, rehefa naharitra tsara Abrahama, dia nahazo ny tenifikasana.
6:16 "Fa ny olona dia mianiana tokoa amin’izay lehibe noho ny tenany; ary ny fianianana dia ataony mba hahamafy ny teny hampitsahatra ny fifandirana rehetra."
6:17 Ary amin’izany, raha Andriamanitra te-haneho kokoa amin’ny mpandova araka ny tenifikasana ny tsy fiovan’ny heviny, dia nohamafisiny tamin’ny voady izany,
6:18 "Mba ho zavatra roa loha tsy mety miova, izay tsy hain’Andriamanitra handaingana, no hahazoantsika fampirisihina mafy, dia isika izay nandositra hihazona ny fanantenana napetraka eo anoloantsika;"
6:19 "Izay ananantsika ho vatofantsiky ny fanahy sady mafy no tsy mihetsika, ary miditra any amin’ny efitra lamba;"
6:20 Tany no nidiran’i Jesosy ho Mpialoha antsika, rehefa tonga Mpisoronabe “mandrakizay araka ny fanaon’i Melkizedeka Izy.